स्वास गन्हाउँछ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय - ramechhapkhabar.com
स्वास गन्हाउँछ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
५ असार, काठमाडौं ।
राती ब्रस गरेर सुत्नु आधारभूत सरसफाइको एक हिस्सा हो तर धेरै मानिसहरु राती ब्रस गरेर सुत्दा पनि बिहान स्वास गन्हाउने समस्या हुन्छ । यो समस्या सामान्यतया धेरैको हुन्छ। सामान्यतया तपाईले खानु भएको खाना र पेयबाट स्वास गन्हाउँछ। वास्तवमा, खानाका टुक्राहरू दाँतमा अड्किन्छन् र रातभर मुखमा अड्किएर स्वास गन्हाउँछ। यसको कारण भनेको खानाको कण जति लामो समयसम्म मुखमा रहन्छ, त्यति नै ब्याक्टेरिया बढ्छ जसले सास गन्हाउँछ।
उत्तर स्पेनका प्रख्यात अर्थोडोन्टिस्ट डा. खालेद कासिमका अनुसार यो समस्याबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन किनभने यसलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसैले यस लेखमा हामी डा खालिदले दिएका केही यस्ता टिप्स बताइरहेका छौँ, जसले बिहान उठ्दा मुखबाट आउने दुर्गन्धलाई रोक्न सकिन्छ ।
१. ओरल हाइजीन मेंटेन राख्नुस्
डा खालिदले थेमिररलाई भने, ‘कहिलेकाहीँ मुखको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा बिहानको समयमा स्वास गन्हाउने समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वासको दुर्गन्धबाट बच्ने उत्तम उपाय भनेको आफ्नो ओरल हाइजीन मेंटेन राख्नु हो। दात राम्रो सँग सफा हुने गरि कम्तिमा दुई मिनेटसम्म माझ्नुहोस्। गिजा, जिब्रो र गालाको भित्री भागमा पनि बिस्तारै ब्रश गर्नुहोस् किनभने ब्याक्टेरिया त्यहाँ पनि हुन सक्छ। सधैं फ्लोराइड टूथपेस्ट र एन्टी ब्याक्टेरियल माउथवाश प्रयोग गर्नुहोस्।
२. हाइड्रेटेड राख्नुहोस्
रातको आठ घण्टा सुत्दा तपाईंको मुख सुख्खा हुन सक्छ। वास्तवमा, जब कसैको मुखमा र्याल हुन्छ, तब ब्याक्टेरिया बढ्दैन। तर कसैको मुख सुख्खा छ भने ब्याक्टेरिया बढ्ने र यसले स्वास गन्हाउन सक्छ। साथै हामी सुत्दा र्यालको उत्पादन घट्छ, त्यसैले राती उठ्नेबित्तिकै तिर्खा लाग्छ। आफूलाई सधैं हाइड्रेटेड राख्नुहोस् र प्रशस्त पानी पिउनुहोस्।
३. दैनिक सुन्तला खानुहोस्
भिटामिन सी हुने भएकाले सुन्तलाले दाँत सेतो बनाउने काम गर्छ । भिटामिन सीले र्यालको उत्पादन बढाउन र स्वासको दुर्गन्धलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले दिनहुँ सुन्तला खानुहोस् ।
४. दहीको सेवन गर्नुहोस्
दहीमा ल्याक्टोबैसिलस नामक स्वस्थ ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले तपाईंको पेटमा ब्याक्टेरियालाई सन्तुलनमा राख्न र स्वासको दुर्गन्ध कम गर्न मद्दत गर्छ। स्वादयुक्त दहीको सट्टा, सादा, क्याल्सियम युक्त, बोसो नभएको दही खानुहोस्। यदि यो समस्या लगातार बढ्दै गयो भने एकपटक डेन्टिस्टलाई अवश्य देखाउनुहोस्।
५. कडा गन्धयुक्त खानाहरू नखानुहोस्
यदि तपाई बेलुका प्याज र लसुन खान मन पराउनुहुन्छ भने भोलिपल्ट बिहान मुखबाट दुर्गन्ध आउन सक्छ। त्यसैले राति सधैं सन्तुलित आहार खानुहोस् जसले समग्र स्वास्थ्यलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ।